Abenzi ibhotile oyile abenzi kunye nabanikezeli - China kubalulekile ibhotile oyile mveliso
Izibonelelo zenkampani yethu, izibonelelo zemveliso yethu
Singabantu abaqeqeshiweyo abenza uphando, uphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yokupakisha izithambiso, ukupakisha amayeza kunye nokupakisha ukutya.
Sinelisebe lophando kunye nophuhliso, uninzi lweemveliso zethu zohlobo olutsha zinelungelo elilodwa lomenzi wechiza, ngoku sinamalungelo awodwa omenzi wechiza ama-3 kwiibhotile zethu, sidlulisa isatifikethi sovavanyo, umzekelo iSGS.etc.
Isebe lethu lokuthengisa linelona qela lezorhwebo lwe-e-commerce lihlabathi liphela, iqela lethu lonke linomsebenzi wenkonzo oqinisekileyo.
Ihowuliseyili Amber Green Glass ...
Ihowuliseyili ngaphaya ngaphaya Glass ...
imibala yomnyama ebalulekileyo o ...
imibala 5ml 10ml ukuvuza ubungqina ...
15ml square ecacileyo engenanto Gla ...
Ihowuliseyili Green Amber Glass kubalulekile ukuba oyile Ibhotile
Iikhompyuter / i-CTN: 768
I-Amber yeglasi hood ithintela ukonakaliswa kwe-UV kwaye igcina iioyile ezifanelekileyo zikhuselekile. Iglasi ayinakuchaphazeleka ngeoyile ezinamandla ezifana nesitrasi.
Le bhotile yeglasi ilungele ukugcina kunye nokukhusela ulwelo. Ezi bhotile zeglasi zitywiniweyo nezingavuziyo ziyilelwe ukugcina ukutsha kunye nexabiso. Iibhotile zeglasi zinokugcina ioyile eyimfuneko, iifomati zokutshiza kunye nolunye ulwelo. Zifezekile iioyile ezifanelekileyo, iziqholo, izinto zokunceda, iipilisi, amayeza, i-ect.
Ukhetho lweeCaps kunye neTops luya kufumaneka.
Ihowuliseyili Ukutyeba Cobalt Blue Round Glass Boston ezityeni
Iikhompyuter / i-CTN: 128
Umbala: cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka
Amandla: 15ml, 30ml, 60ml, 120ml, 250ml, 500ml
Service: isilika screen, bexhentsa eshushu, frosting, ileyibhile, umbala yoshicilelo kunye nabanye
Ihowuliseyili iibhotile zeGlass Boston zeoyile ezineeLids
Umthamo: 15ml, 30ml, 60ml, 120ml, 250ml, 500ml
Iikhompyuter / i-CTN: 240
Izibuko: Lanyungang, Shanghai, Ningbo
Uyilo olutsha Amber Glass Single Gourd Kubalulekile Ibhotile yeoli
Umthamo: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Umbala: Amber brown iibhotile zeoyile enye
Ukusetyenziswa: Ioyile ebalulekileyo
Uhlobo: Umgangatho ophezulu
Ihowuliseyili Custom izithambiso refillable engenanto gourd kubalulekile iibhotile zeoli
Ubungakanani: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Indawo yokuQala: Shanghai.Lianyungang, Ningbo
Ilogo: Yoshicilelo esingabizi Ilogo
Inkonzo: isikrini sesilika, ukunyathela okushushu, iqabaka, ileyibhile, umbala wokuprinta, ukuhombisa ngokudubula kunye nezinye iinkqubo
Intengiso eshushu emdaka engenanto engenziweyo yeebhotile zeoyile ezifanelekileyo
Umthamo: 15ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml
Umbala: Iibhotile ezijikelezileyo ezimdaka zikhusela kwimitha ye-UV kwaye zinobungakanani obukhulu bentamo yokugalela ngokulula nokuzalisa.
Ukusetyenziswa: Isikhongozeli esifanelekileyo seeoyile ezifanelekileyo, iziqholo, ulwazi ngeoyile okanye nolunye ulwelo kwaye ziyahluka njengezingxobo kunye namayeza amaninzi kunye neziqholo.
Ihowuliseyili yeglasi yegolide evuthiweyo emdaka ngombala obalulekileyo
Umbala: amber brown
Umthamo: 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
Isicelo: Ayinakusetyenziselwa ukugcina iziqholo zezithambiso, ioyile ebalulekileyo kunye nenye indima engamanzi, iglasi emdaka inendima eyodwa, inokusetyenziselwa ukuthintela ukwaphuka kokukhanya kwelanga, ukuqinisekisa ukusebenza kolwelo.
Ukuhlawula: T / T.
Sula iibhotile ezikumgangatho ophezulu zeoyile ngeentlobo zeekepusi
Isicelo: Iibhotile zeoyile eziyimfuneko lolona khetho lukhethileyo olufanelekileyo, ioyile yokuthambisa, iziqholo zezithambiso, iilebhu, iikhemikhali kunye nolwelo oluninzi.
Phawu: Sula iibhotile ngeenxa zonke zeglasi zilungele ukuhamba.
Intengiso eshushu yeebhotile zeglasi yebhola yeglasi eluhlaza yeoyile efanelekileyo ngeoyile ezahlukeneyo
Umbala: Amber blue
Ukusetyenziswa: Iibhotile zebhola yeglasi eluhlaza okwesibhakabhaka zeoyile ezifanelekileyo ligumbi lokugcina iioyile ezifanelekileyo, iziqholo kunye nolunye ulwelo.
Ibhotile yeglasi yeglasi eshinyeneyo inegalelo elinzima kwaye iyakhusela, isenza ukuba kube nzima kakhulu ukuyaphula okanye ukukrwela.
Isitya se-amber sinokukhusela iioyile ezifanelekileyo kunye neoyile ephetheyo kwingozi. Sine-drip yolawulo olungcono, isinciphisi se-orifice esifanelekileyo esilingana ngokugqibeleleyo kwibhotile, ke xa ulungisa owakho umxube-uya kufumana elona nani lamachaphaza uwafunayo.
Intengiso eshushu Iibhotile zeroli eziMnyama eziGudileyo
Intengiso eshushu engenanto engenanto ebhalwe nge-Porcelain emhlophe ngeBhotile yeoyile
Iikhompyuter / i-CTN: 330
Ibhotile yeglasi yenziwe ngezinto ezinokusingqongileyo, kwaye ayinayo i-BPA kunye nesikhokelo, kwaye inokugcina kwaye isebenzise ulwelo lwakho ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo. Iglasi ikhuseleke kakhulu kuneplastiki kuba iplastiki inokuyicoca ikhemikhali phantsi kweemeko ezithile.
Ibhotile yeglasi inokusetyenziswa okunamandla kwaye ilungele ukudibanisa isicoci sakho, izitshizi, iaromatherapy, isitshizi selinen yasendlini yokuthambisa, ukufafaza iinwele, umoya ococekileyo, umgangatho okanye isicoci sekhaphethi, Umxube weviniga kunye namanzi ukucoca iifestile, ukwenza -up moisturizers zobuso, njl.
Iindidi ngeendidi zeCaps kunye neTops ziya kufumaneka.